China L-Lysine HCL CAS 657-27-2 maka ndị na-emepụta Pharma Grade (USP) | Ekele
Aha ngwaahịa ：: Chika Okpala
Lysine (Abbreviated Lys) bụ otu n'ime ihe dị mkpa nke protein. Ahụ mmadụ chọrọ Lysine nke bụ otu n’ime amino acid asatọ dị mkpa. Mana Lysine enweghi ike ikekọta ya. A ga-enyerịrị ya na nri. Ya mere akpọrọ ya “amino acid nke izizi dị mkpa”. Dịka ezigbo onye na - eme ka nri na - edozi ahụ, Lysine nwere ike ibuli ọnụego maka itinye protein ka o wee nwee ike ịkwalite nri na - edozi ahụ nke ukwuu. Ọ dịkwa mma iji meziwanye uto, gbanwee agụụ, belata ọrịa na ime ka ahụ sie ike. Ọ nwere ike deodorize ma na-adị ọhụrụ na tinned nri.
Gralọ ọgwụ Pharm
1) Ejiri ya na nkwadebe nke ịmịnye amino acid na ịme ka mmetụta ahụ dị mma karịa mmịnye protein hydrolytic na obere mmetụta.
2) Enwere ike ịgbakwunye ihe oriri na-edozi ahụ na vitamin dị iche iche na glucoses, nke eriri afọ na-etinye obi gị dum mgbe ọ gụchara ọnụ.
3) Meziwanye arụmọrụ nke ụfọdụ ọgwụ ma melite nrụpụta ọrụ ha.
Lysine bụ ụdị mmadụ amino acid dị mkpa. Ọ nwere ike ime ka ọrụ hematopoietic, nzuzo nke afọ, melite iji arụmọrụ nke protein, mee ka mgbochi ọrịa dịkwuo elu, debe usoro metabolic ma kwado ụmụaka na ọgụgụ isi.
1) Mee ka anụ ahụ dịkwuo mma ma nwekwuo pasent anụ
2) Meziwanye ojiji nke protein nri ma belata oriri protein
3) Lysine bu ihe nkwalite oriri na nkwonkwo fodder nke nwere oru iji meziwanye ochicho nke anumanu na umu nnunu, iguzogide oria, ogwugwo onya, ime anu aru na imezi ihe nke oma Ọ bụ ihe dị mkpa maka ịkpụkọta akwara cranial, sel nke izizi, protin na haemoglobin.
4) Zere piglet scours, belata ọnụahịa nke ndepụta ma melite nlọghachi akụ na ụba
Lysine dị maka ịhazi mgbagwoju amino acid dị mgbagwoju anya ma mee ka mmetụta dị mma karịa perfusion protein na obere mmetụta. Enwere ike ịme ihe na-eme ka ahụ sie ike dị iche iche na vitamin na glucoses dị iche iche, eriri afọ gastro na-etinyekwa obi ya ngwa ngwa. Lysine nwekwara ike melite arụmọrụ nke ụfọdụ ọgwụ na arụmọrụ ha.
Ihe USP32 USP40
Ihe njirimara Kwezie Kwezie
Nnwale 98.5% ～ 101.5% 98.5% ～ 101.5%
PH Uru 5.0 ～ 6.0 -
Loss na ihicha ≤0.4% ≤0.4%
Fọduru na mgbanye ≤0.1% ≤0.1%
Chloride (dika Cl) 19.0% ～ 19.6% 19.0% ～ 19.6%
Arọ Ọcha (dika Pb) 15ppm 15ppm
(Gwè (dị ka Fe) ≤30ppm ≤30ppm
Sulfate (dika SO4) ≤0.03% ≤0.03%
Amino acid ndị ọzọ Kwezie Kwezie
Organic obodo adịghị Mezuo ihe a choro -
Specific Ntughari + 20.4 ° ～ + 21.4 ° + 20.4 ° ～ + 21.4 °
Nke gara aga: L-Leucine CAS 61-90-5 maka ọkwa Pharma (USP)
Osote: L-Methionine CAS 63-68-3 maka ọkwa Pharma (USP)
L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm ọkwa, 73-32-5 L-Isoleucine, Gralọ ọgwụ Pharm L-Leucine, Nri oriri na-edozi ahụ, L-Threonine Nri Nri,